भारतमा मोदीले मजदुरका खुट्टा धोएपछि एकाएक भाईरल बन्दै भिडियो! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > भारतमा मोदीले मजदुरका खुट्टा धोएपछि एकाएक भाईरल बन्दै भिडियो!
admin February 24, 2019 जीवनशैली, भिडियो 0
‘स्वच्छ कुम्भ स्वच्छ आभार’ कार्यक्रममा उनले सरसफाइ कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरेका हुन्। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा मोदीले दुई जना महिलासहित ५ जनाको खुट्टा धोएका थिए।मोदीले खुट्टा धोए, त्यसपछि पुछे, ढोगे अनि खादा ‌ओढाइदिएका थिए।
ससुराले कोठा भित्र ना’ङ्गै भएर यस्तो जे गरे, श्रीमानले हेरेरै बसे… प्रमाण सहित (भिडियो)